Tahiti Tourisme hoputara onye isi ala
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Tahiti Tourisme hoputara onye isi ala
Na-agbasa News Travel • Akwụkwọ akụkọ French Polynesia • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Na nzukọ ndị isi oche nke Tahiti Tourisme nke emere na Jenụwarị 13, 2020, e kpebiri ịhọpụta Jean-Marc Mocellin dị ka Chief Executive Officer (CEO) nke Destination Marketing Organisation (DMO) maka Agwaetiti nke Tahiti. Onye nnochite anya ya bụ Maïlee Faugerat, Onye isi oche nke Board of Directors of Tahiti Tourisme, na Minister of Tourism, Nicole Bouteau.
N'ịgbaso ọpụpụ nke onye isi oche mbụ, Paul Sloan na Ọktọba afọ gara aga, oku obodo na mba ofesi maka Tahiti Tourisme malitere.
N'ime ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ etinyere, ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ Michael Page nke ndị DMO goro ọrụ, ndị ahọpụtara 6 ahọrọla ndị Mịnịsta na onye isi oche nke ndị isi oche nke Tahiti Tourisme gbara ajụjụ ọnụ na njedebe nke afọ gara aga.
Mgbe ajụjụ ọnụ ndị a gasịrị, e jigidere akwụkwọ nyocha Maazị Jean-Marc Mocellin ma bunye ya ndị isi oche nke Tahiti Tourisme. A maara ya nke ọma na French Polynesia na n'ime ụlọ ọrụ ndị njem na mpaghara, ọ bụ ugbu a onye isi oche nke Nouvelle Calédonie Tourisme, DMO maka New Caledonia.
Amụrụ na New-Caledonia, Jean-Marc Mocellin hapụrụ mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị iji gaa ọmụmụ ihe ya na Hotel Management na Tourism School of Nice ebe ọ gụsịrị akwụkwọ na diplọma "BTS" (naanị diplọma mba dị elu dị na nke ahụ) oge) site n'igosi ihe omuma banyere "mmepe nke njem njem na-aga n'ihu ma na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi."
Ọ na-achụso ọrụ na mba ndị ọzọ na-ahụ maka ụlọ nkwari akụ nke na-ebute ya na London ebe ọ na-akwụ ụgwọ ozugbo ọ gụsịrị akwụkwọ site na Sheraton Group. A zụrụ ya maka afọ 2, e zigara ya Africa, Benin, Nigeria, Gabon na Egypt ọkachamara n'ịmepe ụlọ nkwari akụ, ka ọ na-arịgo ubube ahụ site na otu ọkwa ruo n'ọzọ.
Mgbe afọ isii dị n'Africa, ọ banyere na Shangri-la ụlọ nkwari akụ nke, mgbe ọ nwesịrị ọzụzụ na Penang-Malaysia, zigara ya na Fiji maka afọ 6 iji jikwaa arụmọrụ nke nnukwu ụlọ ezumike n'oge ahụ, Shangri-la's Ebe obibi Fijian (ime ụlọ ihi ụra 4 / ndị ọrụ 436) na mgbe ahụ General Management nke Shangri-la Mocambo na Nadi.
Mgbe ahụ ọ bịara Tahiti ebe ọ nwere mmasị na Polynesia n'oge 23 afọ mgbe ọ na-ewere njikwa nke akụkọ akụkọ Beachcomber na ọ rụzigharịrị, gbasaa ma ghọọ Intercontinental Resort Tahiti.
Mkpa nke ihe ịma aka ọhụrụ na oku maka ahụmịhe ọkachamara na Asia mere ka ọ hapụ Tahiti ka ọ were ndu nke Intercontinental Hua Hin na Thailand maka afọ 2.
Na ngwụcha nke 2016, ohere iwere ụzọ nke Nouvelle-Calédonie Tourisme na agwaetiti ya mgbe ngalaba ndị njem na-agbasawanye, kpaliri ya ịnabata atụmatụ gọọmentị Caledonia. O tinyere aka na ahia ahia dika onye isi oche nke Nouvelle-Calédonie Tourisme, ebe o mepụtara nkà ohuru n'oge 3 afọ ma nye aka nke oma na nkowa nke usoro mmepe nke njem nke New Caledonia.
“N’ịbụ onye Polynesia bu n’uche, Jean-Marc Mocellin maara ebe a na-aga Agwaetiti Tahiti n’ụzọ zuru ezu yana ahịa ya na-abata abata. O nwere obi uto banyere omenala Polynesia ma nwee obi uto na njem ndi njem. Nicole Bouteau, Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya kwuru. Ihe omuma ya banyere Agwaetiti nke Tahiti na ihe omumu ya na Asia na mpaghara ga-adi oke uru rue ebe a. ”
Maazị Mocellin ga-ewere ọnọdụ ahụ na mbido Eprel. Ruo mgbe ahụ, obere oge njikwa nke Tahiti njem ga-ahụ na Vaima Deniel, onye isi ndị isi ọrụ na mpaghara.